Arsene Wenger Oo Magacaabay Laacibkii Ugu Fiicnaa Ee Bisha January Uu Keenay Arsenal & Aubameyang Oo Uu Soo Hadal Qaadi Waayey - Gool24.Net
Arsene Wenger Oo Magacaabay Laacibkii Ugu Fiicnaa Ee Bisha January Uu Keenay Arsenal & Aubameyang Oo Uu Soo Hadal Qaadi Waayey
May 12, 2020 Abdiwahab A. Abeye
Arsene Weneger ayaa magacaabay laacibkii ugu wanaagsanaa ee uu Arsenal keenay muddadii 22-ka sannadood ahayd ee uu tababaraha u ahaa, suuqa jiilaalka ee January, waxaanu iska indho-tiray Pierre-Emerick Aubameyang oo lagu tilmaamo mid ka mid ah weeraryahannadii ugu fiicnaa ee Gunners.
Pierre-Emerick Aubameyang ayaa Arsenal ay Borussia Dortmund kasoo iibsatay January 2018, waxaanu Wenger la qaatay qaybta dambe ee xili ciyaareedkii ugu dambeeyey ee uu kusoo gunaanadayay waayihiisii Emirates.
Laacibka reer Gabon ayaa markiiba saamayn degdeg ah ku yeeshay Arsenal, kulankiisii ugu horreeyey oo ay Everton ku karbaasheen 5-1 na waxa uu dhaliyey gool iyadoo xili ciyaareedkaas oo uu saftay 13 kulan oo Premier League ah oo kaliya uu dhaliyey 10 gool.
Xili ciyaareedkii xigay, waxa uu ku guuleystay Kabta dahabka ah oo ay wadaageen Mohamed Salah iyo Sadio Mane oo ay dhaliyeen min 22 gool oo horyaalka Premier League oo kaliya ah, xili ciyaareedkan socdana waxa uu illaa hadda diiwaanka gashaday 17 gool iyadoo uu ku xigo Jamie Vardy, laakiin tamartiisa gool-dahlinta ayaa waxay siin kartaa fursad uu ugu guuleysto kabta dahabka ah kalidii oo uu kaga dul-tallaabsado weeraryahanka Leicester City.
Sidaas oo ay tahay, Pierre-Emerick Aubameyang ma kasbanin inuu helo kalsoonida Wenger oo loo magacaabo saxeexii ugu wanaagsanaa ee bisha January.
Murashaxiinta kale ee ku jiray tartanka ee Wenger uu Arsenal keenay bisha January waxa ka mid ahaa Theo Walcott oo u saftay Gunners 400 kulan una dhaliyey in ka badan 100 gool ka hor intii aanu uga wareegin Everton.
Emmanuel Adebayor, Jose Antonio Reyes, Andrew Arshavin, Nacho Monreal iyo Emmanuel Eboue ayaa dhamaantood yimid bisha January balse calfan waayay magacaabista Wenger.
Tababaraha hore ee Arsenal oo u warramayay telefishanka beIN Sports waxa uu laacibkii ugu fiicnaa ee bisha January uu lasoo saxeexday uu ku sheegay halyeygii reer Nigereia ee Nwankwo Kanu oo sannadkii 1999-kii yimid garoonkii Highbury ee ay Arsenal kasoo guurtay, kaas oo uu sheegay inuu saamayn degdeg ah ku yeeshay.
“Waxa laga yaabaa inuu ahaa Nwankwo Kanu. Badhtamaha xili ciyaareedka ayuu yimid, waxaanu yeeshay saamayn weyn, wuxuu ahaa ciyaartoy weyn.” Ayuu yidhi Arsene Wenger.
Shantii ciyaarood ee ugu horreeyey, Kanu waxa uu Arsenal u dhaliyey toddoba gool iyo laba gool oo kale oo uu caawiyey, waxaanu guud ahaan u ciyaaray muddo shan sannadood ah oo uu joogay Arsenal 197 kulan oo uu u dhaliyey 44 gool oo saamayn weyn lahaa.
Sannadkii 2008 ayey taageereyaasha Arsenal cod kusoo doorteen 50kii ciyaartoy ee ugu wanaagsanaa taariikhda Arsenal, waxaanu kasoo galay kaalinta 13aad.
Muddada uu joogay Arsenal waxa uu kula guuleystay laba horyaalka oo Premier League ah iyo laba FA Cup ka hor intii aanu sannadkii 2004 ka tegin ee aanu usii kala gudbin West Brom iyo Portsmouth. Ka hor intii aanu Arsenal ku biirinna waxa uu u ciyaaray Ajax iyo Inter Milan oo ahayd kooxdii uu Wenger kasoo qaatay.